Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2014 | May
Posted on May 31, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-31 16:24:16
All Political Prisoners List
Posted on May 31, 2014 by freeburma
ပရဟိတ ကတော့ ပြောတာတော့ ခက်တယ်။ လူတိုင်းကတော့ လုပ်တာပဲ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် မသိတာပေါ့။ လူတယောက်ကို ကူညီတာ ပရဟိတ ပဲလေ။ အဲဒီလို စိတ်ကတော့ အမြဲရှိတာပေါ့။
The post “အများကို ကူညီတဲ့သူဟာ ပရဟိတ လုပ်တာပဲ” appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1oGM9wD
သူထွက်သွားပြန်ပြီ – ရွှေကူမေနှင်း
စိတ်ဆိုးသွားတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့အထဲက တစ်ယောက်က စင်ပေါ်ကနေ ၉၀ အမတ်တွေဟာ NLD ကို ၀န်းရံမယ်။ လေးပွင့်ဆိုင် ကို ထောက်ခံတယ် ပြောသွားလို့ စိတ်ဆိုးတာတဲ့ . . . မိုးတွေဖြိုင်ဖြိုင် ရွာနေသည်။ ဖုန်းသံက မိုးသံကြားမှ မြည်လာ၏။ ““အစ်မရေ ဆရာဦးသန်းငြိမ်း မနက် ၆ နာရီကဆုံးပြီ”” မျှော်လင့်ပြီးသားသတင်း ဖြစ်သော်လည်း ဤအသံကို မကြားလိုပါ။ မနှစ်တုန်းကလည်း ယခုလို မိုးသည်းသည်း မနက်မှာပင် ဖုန်းက မက်ဆေ့ခ်ျရောက်သံ ကြားရ၏။ ဖွင့်ကြည့်တော့ ““မောင်ဝံသ မနက် ၆း၁၅ မှာ ဆုံးတယ်””ဟူသော အင်္ဂလိပ်စာ လုံးများ ကို မြင်ခဲ့ရသည်။ မောင်ဝံသ ဆုံးကြောင်း သတင်းပို့ သူက ဆရာကြည်မင်းဖြစ်၏။ ယခုဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ဆုံးကြောင်း […]
via မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းစာ http://ift.tt/1oGM7oG
Posted on May 28, 2014 by freeburma
ယခု ၂၀၁၄နှစ်ဦးပိုင်းမှစ၍ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဆန္ဒပြသူများ၊ လယ်သမားများနှင့် သတင်းထောက်များ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရမှု ကိန်းဂဏန်းသည် ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင် ရှိနေဆဲဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်အောင် ဆက်လက်တောင်းဆိုသွား မည်ဖြစ်သည်ဟု AAPP က ပြောသည်။
via သတင်း http://ift.tt/1oLjTXl
Posted on May 28, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
နိုင်ငံတကာမှ ညီအကို မောင်နှမများလည်း ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါပြီ။ အမျိ…
နိုင်ငံတကာမှ ညီအကို မောင်နှမများလည်း
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါပြီ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့စည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအား ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေကြသော
မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း မိမိဆန္ဒအရ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြါ့ပီခင်ဗျာ။
၅။ လူတစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာလက်မှတ်ရေးထိုးဆန္ဒပြုရပါမည်။
အထက်ပါအချက်များနှင့်အညီ အောက်တွင်တင်ပေးထားသော ဆန္ဒပြုလက်မှတ်ထိုးဇယားပုံစံအတိုင်းသာ လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီးနောက် စကင်ဖတ်၍
အမျိုးသားဒီမိုကရေစိအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ် အီးမေးလ်လိပ်စာ info.nldburma@gmail.com သို့ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။credit by Min Kyaw Khine.
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Laws, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Laws, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
Posted on May 27, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
The article of AAPP's Mental Health Assistance Program
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-27 07:38:25
Activists who were indicted udner 18, 19 & 505 (b) in 2014 Under Trial List
Under Trial List -2014 update on 27, May 2014. 1). Thar Cho aka Kyaw Moe Zaw N/A (section 18) NLD Joint Secretary, Pyinmana Tsp. Pyinmana Tsp, Mandalay Division 4-Jan-14 He was arrested on January
Still remaining Political Prisoners in Burma.
59-List(26 May 14)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-27 05:22:18
The Ongoing Arrests of Political Activists in Burma Date… 27, May 2014. The end of 2013 saw numerous government statements that convinced much of the outside world that
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-27 05:13:55
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေဆဲ ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အကုန်ပိုင်းတွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလ
Posted on May 26, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Vocational Training Program Driving course (4) 12 former political prisoners wer…
Vocational Training Program Driving course (4)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-26 04:30:57
၂၈.၅.၂၀၁၄ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီတွင် မြောင်းမြမြို့ လူငယ်ကွန်ယက်စာသင်ခန်းမ
တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ — with Naw Khu Paw Wah and 22 others.
Posted on May 23, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-05-23 16:44:49
အရပ်သားအစိုးရခေတ် အကျဉ်းသမား ကိုအေးသိန်း ပါ ၉ ဦးတိုး
နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ဥပဒေဟာ ဥပဒေအထက်ကလူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နာမည်ပျက်ခဲ့ပေမဲ့ ပြည်သူ့ အတွက် ဥပဒေ ဆိုတာကတော့ မှန်ဆဲပါ
ဒီကနေ့ မှာတော့ ယခင် ပြည်သူ့ ရဲများဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ လို့ ပြောင်းလဲလို့တားဆီးရေး ပိတ်ပင်ရေး ဖမ်းဆီးရေး တရားရုံးစွဲတင်ရေး သက်သေထွက်ရေးတွေနဲ့အလုပ်၇ှုတ်နေကြသလို လယ်သမားတွေ အလုပ်သမားဈေးသည်တွေ အများအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေး သူတွေကို နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် တရားရုံးထုတ် အချုပ်ပို့ စသဖြင့်လည်း စောင့်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်
ဥပဒေမဲ့ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့ကူညီဖြေရှင်းပေးသူတွေ ဥပဒေအရဆိုကာ ထောင်ကျ တာတွေ ခပ်စိပ်စိတ်ဖြစ်လာနေချိန်မှာ မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစည်တရားရုံးကလည်း ၉ ယောက်တိတိ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်
ကိုအေးသိန်း၊ကိုကျော်သီဟ၊ကိုဝင်းအောင်၊ကိုဝင်းချို၊၊ကိုဝင်းကို နဲ့ကိုအုန်းကျော် ၊မမျိုး၊မသင်း နဲ့မရှမ်းမ ခေါ် မရွှေလျှံ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်
သူတို့ ဟာ မြရည်နန္ဒာ မြေယာကိစ္စနဲ့ ပုဒ်မ ၄၄၇ ၊၃၅၃၊၁၁၄ တို့ နဲ့တစ်နှစ်နီးပါး ကြာတရားရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပြီး ဒီကနေ့ မှာတော့ ပုဒ်မ ၃၅၃ တစ်ခုတည်းနဲ့ထောင် ၆ လ စီချခံခဲ့မှတ်ခံခဲ့ရတာပါ ၊
ကိုစိုးမိုးအောင်၊ကိုကျော်စိုး နဲ့ကိုနိုင်လင်းကိုတော့ တရားသေ လွှတ်လိုက်ပါ သတဲ့ — with Ko Aung Myint Myat.
ကိုစိုးမိုးအောင်၊ကိုကျော်စိုး နဲ့ကိုနိုင်လင်းကိုတော့ တရားသေ လွှတ်လိုက်ပါ သတဲ့